 Mgbe ahụ Jisọs kọkwaara ha akụkọ ọzọ sị ha, “E nwere otu nwoke mụtara ụmụ nwoke abụọ. Nwa ya nwoke nke nta bịakwutere nna ya otu ụbọchị sị ya, ‘Nna m, kenye m ugbu a, site nꞌakụ na ụba i nwere, ihe m kwesịrị iketa mgbe i nwụrụ.’ Nna ya kenyere nwa ya ahụ ihe o kwesịrị iketa. “Mgbe ụbọchị ole na ole gasịrị, nwokorọbịa ahụ kwakọtara ihe nile o nwere hapụ ezi nna ya gaa biri nꞌotu obodo dị nnọọ anya. Nꞌebe ahụ, o mefuchara ego nile o nwere na ndụ ọjọọ. Mgbe ọ zụfuchara ego nile o nwere, ụnwụ bidoro nꞌobodo ahụ, nke mere ka nwokorọbịa ahụ bido ịnọ agụụ. Nꞌihi nke a, ọ gara binyere otu onye obodo ahụ, onye nyere ya ọrụ ilekọta ezi ya na inye ha nri. Ma agụụ gụrụ nwokorọbịa a nke ukwuu, mee ya ka ọ chọọ iri site na nri ọ na-enye ezi, ma ọ dịghị onye nyere ya ụdị nri ahụ ka o rie. “Otu ụbọchị, mgbe ọ nọdụrụ chee echiche banyere ọnọdụ ya, ọ jụrụ onwe ya ajụjụ sị, ‘Nꞌihi gịnị ka m ga-eji nwụọ nꞌagụụ nꞌebe a mgbe nna m nwere ọtụtụ ndị na-ejere ya ozi, ndị nwere nri na-ezuru ha mapụtakwa?’ O kpebiri nꞌobi ya sị, ‘Aga m alaghachikwuru nna m. M ruo ebe ahụ, aga m agwa ya sị, Nna m, emehiela m megide Chineke. Emehiekwala m megide gị. Ekwesikwaghị ka a kpọọ nwa gị ọzọ. Biko were m ka m bụrụ otu nꞌime ndị na-ejere gị ozi.’ *** “Mgbe nwokorọbịa a nwere mkpebi a nꞌime onwe ya, ọ hapụrụ obodo ahụ ịlaghachikwuru nna ya. Ma mgbe ọ nọrịị ebe dị anya na-alọta, nna ya lepụrụ anya hụ ya ka ọ na-abịa, nwee ọmiko nꞌahụ ya. O si nꞌụlọ ya gbapụta, gaa zute ya, bakụọ ya, kelee ya. “Mgbe ahụ nwokorọbịa ahụ gwara nna ya sị, ‘Nna m, emehiela m megide gị. Emehiekwala m megide Chineke. Ekwesịghị m ka a kpọọ m nwa gị ọzọ.’ “Ma nna ya gwara otu onye na-ejere ya ozi sị, ‘Mee ngwangwa weta uwe kachasị mma dị nꞌụlọ bịa yikwasị nwa m uwe ahụ. Gbanyekwa ya ọla nꞌaka, nyekwa ya akpụkpọ ụkwụ ka o yiri, gaakwa kpụpụta otu ehi gbara abụba gbuo ya ka anyị na ndị enyị anyị soro rie. Nꞌihi na nwa m a, ka m gụrụ dị ka onye furu efu. Ma ugbu a a chọtala ya.’ Emesịa, ha bidoro iri na ịṅụ na ịṅụrị ọṅụ.
 A zọpụtara anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke. Ịtụkwasị mmadụ obi bụ inwe olileanya na anyị ga-esi nꞌaka ya nata ihe anyị na-enweghị ugbu a. Nꞌihi na ọ baghị uru mmadụ inwe olileanya nꞌihe o ji anya ya na-ahụ ugbu a. Ọ bụrụkwa na anyị nwere olileanya na ọ dị ihe Chineke ga-emere anyị, anyị kwesịrị iji ndidi chere ruo mgbe o mezuru ihe ahụ. Mgbe ọ bụla kwa anyị ji ndidi na-eche ihe anyị nwere olileanya na anyị ga-enweta, Mmụọ Nsọ na-enyere anyị aka nꞌọnọdụ adịghị ike anyị nile. Nꞌihi na nꞌọnọdụ ụfọdụ, anyị adịghị ama ihe anyị kwesịrị ịrịọ Chineke ka o meere anyị, ma ọ bụ otu anyị ga-esi doo ọnụ anyị kpee ekpere ahụ, ma Mmụọ Nsọ na-eji ịsụ ude nke mmadụ na-enweghị ike ịkọwa na-arịọrọ anyị arịrịọ. Chineke Nna anyị, onye na-enyocha obi mmadụ nile makwaara ihe Mmụọ Nsọ ahụ na-eche, mgbe ọ na-arịọ arịrịọ ahụ nꞌusoro, dị ka Chineke si chọọ. Anyị makwaara na ọ bụrụ na anyị hụrụ Chineke nꞌanya, na-emekwa ihe ọ na-achọ, ka ha ha, bụ ihe nile na-adakwasị anyị nꞌọnọdụ ọ bụla, bụ ihe Chineke ji na-arụ ọrụ, ịrụpụta ezi ihe na ndụ anyị. Nꞌihi na site na mmalite ihe nile, Chineke maararị ndị ga-abịakwute ya. O kpebikwara na ndị a ga-abịakwute ya ga-adị ka Ọkpara ya Jisọs Kraịst, ka Jisọs bụrụ onye okenye e bu ụzọ mụọ nꞌetiti ọtụtụ ụmụnna. Ọ bụkwa ndị ahụ nile Chineke họpụtara, ka ọ kpọrọ ka ha bịakwute ya. Mgbe ha bịara, Chineke mere ka ha bụrụ ndị ya na ha dị na mma. Ọ gụrụ ha dị ka ndị na-emeghị mmehie ọ bụla, meekwa ka ha bụrụ ndị gaeketa oke nꞌebube ahụ o kwere na nkwa.
 Nꞌihi nke a, anyị na-eji unu na-anya isi nꞌetiti nzukọ Kraịst nile. Anyị na-akọrọ ha otu unu si jiri ntachi obi nọgidesie ike nꞌime nsogbu nile dakwasịrị unu, na otu unu si nwee okwukwe dị ukwuu nꞌime Chineke, ọ bụladị nꞌetiti oke mkpagbu a na-akpagbu unu. Nke a bụ nanị otu ụzọ Chineke si gosi na ihe nile ọ na-eme bụ ihe ziri ezi. Nꞌihi na Chineke na-eji nsogbu ndị a dakwasịrị unu na-akwado unu maka alaeze ya.
 Ndị a nile bụ ndị nwere okwukwe nꞌime Chineke. Ma ha nwụrụ na-ele anya nkwa Chineke kwere ha. Ha ṅụrịrị ọṅụ nꞌihi nke a, na-aghọtakwa na ha bụ ndị ọbịa nꞌụwa. Nꞌezie, ndị a nile gụrụ onwe ha dị ka ndị ọbịa nꞌụwa lere anya ala ọzọ. Ha na-ejikere maka ụlọ ha dị nꞌeluigwe. Nꞌihi nke a, ha achọghị ile anya nꞌazụ nꞌihe ụwa ha hapụrụ. Ha gaara alaghachi azụ ịchọ ọganihu ụwa. Ma ha dabeere na-ele anya ngọzi sị nꞌeluigwe nke Chineke na-enye. Nke a bụ nꞌihi na ha chọrọ ibi nꞌụlọ ha dị nꞌeluigwe. Nꞌihi nke a Chineke naara ha dị ka ụmụ ya. Ihere ha emeghị ya. Nꞌihi na o dozielara ha ebe obibi nꞌeluigwe.
 Nꞌihi na site nꞌokwukwe anyị, Kraịst akpọbatala anyị nꞌime amara nke Chineke, ebe anyị nọ ugbu a. Anyị nọ nꞌọṅụ nweekwa olileanya na Chineke ga-eme ka anyị keta oke nꞌebube ya. Ọ bụkwaghị nanị nke a, ma anyị na-aṅụrịkwa ọṅụ nꞌime nsogbu anyị nile, ebe anyị maara na nsogbu ndị a na-enyere anyị aka ịbụ ndị nwere ntachi obi. Ntachi obi na-arụpụta nꞌime anyị mmụọ nke iguzosi ike, nke na-enyere anyị aka ịtụkwasị Chineke obi nꞌọnọdụ ntachi obi ọ bụla, tutuu ruo mgbe olileanya anyị na okwukwe anyị guzosiri ike.
 Ma mgbe a nyakapụrụ akara nke ise, ahụrụ m otu ebe ịchụ aja. Nꞌokpuru ebe ịchụ aja ahụ ka m hụrụ mkpụrụ obi ndị nile nwụrụ anwụ nꞌihi ozi ọma nke Chineke na nꞌihi na ha guzosịrị ike ịgba ama nke eziokwu na nke ndụ zuru oke. Ha nile nọ na-eti oke mkpu na-akpọku Onyenwe anyị na-asị ya, “Gị Onyenwe anyị, Onyenwe ihe nile, Onye dị nsọ na Onye eziokwu, ọ̀ bu ruo ole mgbe ka ị na-eche ikpe ụwa na ndị bi nꞌime ya ikpe nꞌihi ajọ omume ha mesoro anyị? Ọ̀ bụ ruo ole mgbe ka ị na-eche ịbọrọ anyị ọbọ nꞌihi ọbara anyị ndị nile bi nꞌime ụwa wufuru?” Nꞌotu oge ahụ, e yikwasịrị ha uwe dị ọcha nꞌotu nꞌotu. A gwakwara ha ka ha zuru ike nwa oge, tutuu ruo mgbe ụmụnna ha a ga-egbu nꞌihi ozi ọma Jisọs Kraịst ga-abịa soro ha dịkọọ ndụ ọzọ.